लकडाउनको एउटा कुनाबाट चिहाएको (कोभिड-१९) – Karnalisandesh
लकडाउनको एउटा कुनाबाट चिहाएको (कोभिड-१९)
प्रकाशित मितिः १६ चैत्र २०७६, आईतवार २०:०१ March 29, 2020
मलाई मृत्युसँग कहिलै डरलाग्दैन। तर, जीवनदेखि सधै संबेदनशिल नै छु। बेलायती राजकुमार चार्ल्सलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएका समाचार आउँदा मनमा अनेकौं प्रश्न र उत्तरहरु सल्बलाए।
दिमाख अलिक बढी नै हतार गतिमा दौडियो। लकडाउनले बिरक्तिएको मन समाचार पढ्ने, साथिभार्इ र आफन्तसङ फेशबुक र ट्वीटर जस्ता सामाजिक सन्जालमा जोडीनु, म्युजिक र केही पुस्तकहरु अध्यनगर्नु नै दिनचर्या बनेको छ।
एक छिन सबै चिजबाट टाढा बसेर सोच मग्न हुन्छु। संसारभरी कोरोन सम्बन्धी समाचारहरु नै मानुटलमा सल्लाबउछन्। २५ सय वर्ष पूरानो धार्मिकग्रन्थ महाभारतमा छापिएको छ पृथ्वीमा चार युगहरु मध्ये सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुग, हामी अहिले कलि युगमा छौँ। महाभारत र गितामा स्पस्ट लेखिएको छ, कलिको अन्त्य अन्त्यतिर मानिसको मृत्युको सन्ख्या बढ्ने छ।
दाइभाईबीच झगडा र काट्मार हुने छ, पृथ्वीमा दैवैक प्रकोप अत्यन्तै बढ्ने छ, भूकम्प पाकिस्तानबाट सुरु हुनेछ न भन्दै सन् २००८ मा पाकिस्तानमा महा प्रलय नै भएको थियो। बिश्वका शक्ति साली रास्ट्रहरु र शक्तिशाली मानिसको शक्ति घट्ने छ भनिएको छ। चेलिबेटी बेच बिखन, बलात्कार र हत्या सामान्य झै हुनेछन्। अचम्मै लाग्छ, के यो महाभारत र गितामा यि बस्तुहरु सम्प्रेषण गर्नेले नै आजको यो दुनियाँमा यो घटना घटाउदै छ? अचम्मित छु २५ सय वर्ष पहिला लेखिएको कुरा सत्य साबित हुँदै जादा मेरो व्यक्तिगत धारणामा यदि कोरोनाले अबको बाँकी ६ महीना मात्र राज जमायो भने कोरोना लागि रहनै परेन नि मानसिक रोग र तनावले नै संसारमा आधा जनसंख्या बिरामी होलान्।
मलाइ यत्तिखेर सारै माया लागेर मन बिचल्लीत भएको भनेको बिश्वमा रहेर मानवजातीको रक्षा र सुरक्षार्थ खटिएका नर्श र डाक्टर,अनि प्रहरी र आर्मीप्रती हो। त्यस्मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलिक सुबिधा सम्पन्न नै छ। नेपाल प्रहरी र आर्मीसङ त रक्षा र प्रतिकार गर्ने श्रोत र साधन गतिलो छ। तर, बिना प्रतीरक्षा, र बिना कुनै भौतिक सामग्री के ती नेपाली डाक्टर र नर्शहरुले आफ्नो ज्यान माया मारेर अरुलार्इ बचाउन लाख खर्चेर रात दिन भोक तिर्खा न मानी जीवनको जीवनको अमूल्य समयमा अध्ययन गरेका हुन्। यसप्रती खै सरकारको ध्यान ? किन मौन छ सरकार ? के मेरो देशका कुनै पनि नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्न पाइदैन?
अन्तिम समयमा आएर लकडाउन गरेर सरकारले राज्य र नागरिकप्रती देखाएको उत्तर दायित्व अत्यन्तै जायज छ। तर, हामी नागरिक पनि संबेदनसिल र सजक रहन तेत्तिकी जरुर छ। लकडाउनको पालना गरौं र सरकारले पनि सहि स्थानमामा सहि व्यवस्थापन सहि चेक जाँचको व्यवस्था मिलाउनको साटो नागरिकमाथी अमानवीय ढंगले चरम यातना र दमन गर्न बन्द गरौं। मेरो ध्यान अत्यन्त तल्लो वर्गतिर पुगेको छ। जो दिन भर काम गरेर बेलुका हात मुख जोड्न्छन। हामी केही र कोहस्सङ्ग सिमित मात्रामा भए पनि खाद्यान्न को जोहो छ। तर, दैनिक ज्यालादारीमा जीवन धान्नेहरुको हालत के होला?
यस्मा र एस्ता अत्यन्तै दुःखद क्षेत्र अनि अत्यन्तै तल्लो वर्गमा सरकारको ध्यान जाओस्। कृपया ढिलो नगरी उनीहरुको समस्या समाधानतिर लागौं। मलार्इ पनि लाग्छ बिश्व अर्थतन्त्रलाई झन्डै १०/१५ वर्ष पर कोरोनाले धकेल्न छ। कोरोनाको सरकारी कोषमा काङ्ग्रेसले ५० लाखदिने घोषणाले कोरोनाले त्रासदी भएका नेपालीको मनमा मह्मपट्टि साच्चै नै लागेको छ। व्यापारी बिनोद चौधरीको ५० लाख आर्थिक सहयोग र देशभरी कोरोना ब्यबस्थापनमा भौतिक सामग्री सहयोगको घोषणाले हरेक नेपालीको आत्माबल गिर्न दिनेछैन।
रोगसङ लड्ने पहिलोप्रती रोधी क्षमता नै आत्मा बल हो। यस्ता आत्मा बल बढाउन पुर्ण मत्दत गर्ने सहयोगीहरु चाए राज्नितीसङ जोडिएरहोस। चाहे समाज सेवासंघ जोडिएर होस्। हृदयदेखि स्वागत योग्य छन्। हामी सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट संवेदनशिल भएर सतर्कता अपनाउनु नै कोरोना जस्ता भयानक रोगहरुबाट बच्ने उत्तम उपाय हुन्। सामाजिक संजालमा जोडिदै गर्दा प्रियमित्र हेमकुमार बिष्ट अमेरिकाको वाशिङ्टन सेटलबाट भन्नू हुन्छ। गिता जि नेपाल त कृषि प्रधान देश हो। तर, विकसित र समृद्ध रास्ट्रहरु जहाँ हवाई जहाजबाट खाद्यान्नको समाधान हुन्छ यदि अरु ४ महिना मात्रै कोरोना रह्यो भने के चाइयो कोरोना ? मानिस भोकमरीले सकिन्छौं।
त्यस्तै सामाजिक संजाल मै जोडिदा आरसि बोगटी गोर्खा हाल पर्देशबाट आफ्नो फेसबुकबालमा लेख्नु हुन्छ, शिष्ट ,सभ्य,अनि दयालु नेपाल र नेपाली बनौ केही त सिक्नैपर्छ घरभित्र बसेर हामी जहाँ छौं। सुरक्षित र सकारात्मक भएर बसौ यो बिश्वलाई परेको समस्या हो। कसैले कुनै नियतले हेल्चेक्रे र ठट्टा नगरौं, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरु हामीहरुकै लागि आफ्नो ज्यान कोरोना भाइरसको धारमा सुम्पिएर हाम्रै सेवा मा २४ घन्टा खटीरहनु भएको छ। कृपया जो जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो कर्तव्य निभाइ सभ्य नेपालीको परिचय दिनुहोला। सुरक्षाकर्मी बाटोबाटोमा हिड्दै गर्दा वरिपरी रहनु हुने नेपालीहरुले पानी पिलाएर फल्फुलसमेत खुवाएका तस्बिर र भिडियोहरु देख्दा सारै खुसी लागेको छ। सक्भर आफ्नो ठाउँबाट केही त गर्नु पर्यो तत्काल ढिलो न गरि स्वस्थ्य र सुरक्षामा ध्यान जावोस्।